Afọ a gbapụ na Teruel ma ọ bụ Verona maka ụbọchị ịhụnanya na ịhụnanya gị | Akụkọ Njem
Maria | | Getaways Europe, General, Ihunanya
Akpọrọ kọntinent ochie ahụ maka nsọpụrụ maka ada mara mma nke eze Finishia Agénor, onye Zeus rafuru wee bụrụ eze nwanyị mbụ nke Krit mgbe chi a dabara n'ịhụnanya ya. Site na mmalite ya, e jikọtara Europe na ịhụnanya site na akụkọ ifo a na site na ịbụ ntọala maka ụfọdụ akụkọ ịhụnanya na-ewu ewu na akwụkwọ ọgụgụ.
Jiri asambodo ndị a, Ugbu a na inebọchị Valentine na-abịaru nso, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịpụ njem gaa ụfọdụ ebe kachasị ịhụnanya na kọntinent ahụ, dịka Verona (Italy) ma ọ bụ Teruel (Spain). Ọnọdụ abụọ nke akụkọ ịhụnanya abụọ dị egwu dịka nke Romeo na Juliet n'otu aka na nke Isabel de Segura na Diego de Marcilla na nke ọzọ. Nwere ike soro anyị?
1 Valentbọchị Valentine na Verona
2 Valentbọchị inepo na Teruel
Valentbọchị Valentine na Verona
Shakespeare họọrọ obodo a ka ọ bụrụ ọnọdụ maka ọdachi mmekọrịta ịhụnanya kachasị ama oge: Romeo na Juliet, ndị na-eto eto hụrụ n'anya n'ezinụlọ ndị iro abụọ.
N’ụbọchị Valentine, a na-eji okooko osisi chọọ ọmarịcha okporo ụzọ na ámá ndị dị n’obodo ahụ mma na balloons obi iji mee ka ọtụtụ narị ndị di na nwunye si n’akụkụ nile nke ụwa nọọ ụbọchị nchefu. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịga na ụlọ ndị hụrụ ha n'anya, ọnụ ụzọ Juliet bụ n'efu n'oge ụbọchị ịhụnanya. Ọ bụ ụlọ eze Gothic nke narị afọ nke XNUMX nke nwere mbara ihu ama ama ama ama dị ka Juliet's Balcony, nke ghọrọ nnukwu njem ndị njem. N'ebe ahụ ka a na-ahazi asọmpi "Amada Julieta" bụ nke a na-enye akwụkwọ ozi ịhụnanya kachasị mma.
Nakwa na Plaza dei Signori, a na-ahazi ahịa aka ọrụ nke edoziri ụlọ ahịa ya n'ụzọ pụrụ iche iji dọta obi. N'ebe ahụ ị nwere ike nweta onyinye zuru oke maka onye òtù ọlụlụ gị ma mee ka ọnụnọ a bụrụ ebe nchekwa na-agaghị echefu echefu. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, a ga - enwe mmemme pyrotechnic, egwu, egwu uri, mmemme egwuregwu na ngosi na-agbakwunye agwa ọdịnala na oku na-enye ndị hụrụ ọhụụ ahụmịhe pụrụ iche.
Ugbu a, Verona na-anwa ibido ọrụ yiri nke agbamakwụkwọ Isabel de Segura na Teruel, iji tinye aka na Veronese na nlọghachi akụkọ ihe mere eme nke Romeo na Juliet ma si otú a gbaa ndị njem ume karịa.
Valentbọchị inepo na Teruel
Kemgbe afọ 1997 obodo ahụ na-alọghachi na Febụwarị akụkọ ịhụnanya jọgburu onwe ya nke Diego de Marcilla na Isabel de Segura na ụbọchị Valentine. Abọchị ole na ole, Teruel laghachiri na narị afọ nke XNUMX na ndị bi na ya na-eji ejiji oge ochie ma chọọ etiti obodo ahụ akụkọ ihe mere eme iji gosipụta akụkọ mgbe ochie. Ememme a, nke a maara dị ka agbamakwụkwọ Isabel de Segura, na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa kwa afọ.
A na-eme atụmatụ ọtụtụ ọrụ na obodo Aragonese n'oge ememme a. Nke kachasị pụta n’afọ a bụ opera nke Los Amantes de Teruel, nke a ga-eme n’ọgbakọ mara mma nke San Pedro, otu n’ime ntọala mbụ n’akụkọ ihe mere eme nke ndị a hụrụ n’anya.
Egwú ahụ ga-elekọta Javier Navarrete (onye mmeri nke Emmy Award na onye a họpụtara maka Grammy na Oscar) na libretto ga-adabere na ederede ochie na akwụkwọ ndị Kraịst. Ihe eji eme ihe ga-adi obere ma o siri ike.
A ga-enwe ahịa maka ụdị ngwaahịa na ọrụ aka, ihe nkiri ma ọ bụ ihe ngosi egwuregwu iji tinye mgbakwunye ọdịbendị na mmemme ahụ.
Akụkọ banyere ndị hụrụ n'anya, nke malitere na narị afọ nke 1555, nwere mgbọrọgwụ akụkọ ihe mere eme. Na XNUMX, ka a na-arụ ọrụ ụfọdụ a na-arụ na chọọchị San Pedro, ahụrụ ozu nke otu nwoke na nwanyị e lirila ọtụtụ narị afọ gara aga. Dị ka akwụkwọ achọtara mgbe e mesịrị, ozu ndị ahụ bụ nke Diego de Marcilla na Isabel de Segura, ndị nke Ndị hụrụ Teruel n'anya.
Isabel bụ nwa nke otu n'ime ezinụlọ ndị kasị baa ọgaranya n'obodo ahụ, ebe Diego bụ nwa nke abụọ n'ime ụmụnne atọ, nke n'oge ahụ dị ka enweghị ikike nke ihe nketa. Maka nke a, nna nwata nwanyị jụrụ inye ya aka ya mana nye ya oge nke afọ ise iji baa ọgaranya ma mezuo ebumnuche ya.
Ọdachi mere ka Diego laghachi na agha na akụ na ụba n'ụbọchị okwu ahụ gwụrụ na Isabel ịlụ nwoke ọzọ site na nhazi nke nna ya, na-ekwenye na ọ nwụọla.
N'ịbụ onye na-arụ ọrụ, nwa okorobịa ahụ rịọrọ ya ka ya susuo ya ọnụ ma ọ jụrụ dị ka ọ lụrụ. N’ịbụ onye nwere ụdị iti aka ahụ ahụ, nwa okorobịa ahụ nwụrụ n’ụkwụ ya. N'echi ya, na olili ozu Diego, nwa agbọghọ ahụ mebiri usoro iwu wee nye ya nsusu ọnụ nke ọ gọnahụrụ ya na ndụ, ọ nwụrụ ozugbo n'akụkụ ya.
Teruel na Verona bụ akụkụ nke ụzọ Europe Enamorada, Ntanetị Europe nke obodo Spanish kwalitere nke chọrọ obodo ndị otu (Montecchio Maggiore, Paris, Sulmona, Verona ma ọ bụ Teruel) na akụkọ ịhụnanya etinyere n'obodo ahụ ka dị ndụ taa site na ụfọdụ mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ agụmakwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Afọ a gbapụrụ na Teruel ma ọ bụ Verona maka ụbọchị ịhụnanya na ịhụnanya gị